လေဖြတ်ရောဂါအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အပ်လေးတစ်ချောင် – MM Crime
လေဖြတ်ရောဂါအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အပ်လေးတစ်ချောင်
တရုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်က အိမ်တိုင်းမှာ အပ်တစ်ချောင်းလောက်တော့ ဆောင်ထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပ်လေး တစ်ချောင်းကပဲ လေဖြတ်သွားတဲ့လူနာကို ထူးဆန်းစွာ ကုသပေးနိုင်လို့ပါ။ ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွားတဲ့ လူနာကိုတွေ့ရင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း ကယ်ဆယ်ပေးလို့ရတာမို့ သေချာဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားထားကြပါနော်။
လူတစ်ယောက် ရုတ်တရက်လေဖြတ်သွားပြီဆိုရင် ဦးနှောက်သွေးကြောတွေ တဖြည်းဖြည်းပြန့်ကားသွားတတ်ပြီး အရေးပေါ်ကုသပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်ဆယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေဖြတ်သွားတဲ့လူနာက ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေ လုံးဝနေရာမရွှေ့ပေး ပါနဲ့။ သင်သူ့ကို နေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်ထဲ သွေးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အေးထိုးအပ်ရှိရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ လက်ချုပ်အပ်ဆိုရင်လည်း သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
အပ်ကိုပိုးသတ်တဲ့အနေနဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ မီးကင်ပါ။ ထို့နောက် လူနာရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်တွေကို အပ်နဲ့ ထိုးဖောက်ပါ။
ဒီလိုကုသရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိဖို့မလိုပါဘူး။ လက်ချောင်းထိပ်ကနေ သွေးထွက်အောင် ဖောက်တတ်ရင်ရပါပြီ။
လက်ချောင်းဆယ်ချောင်းလုံးကနေ သွေးတွေထွက်လာပြီဆိုရင် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ လူနာ ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ လူနာပါးစပ်ရွဲ့သွားတာ ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် လူနာရဲ့ နားရွက်နှစ်ဖက်လုံးကို နီရဲလာအောင် ပွတ်ချေပေးပါ။ နီရဲလာပြီဆိုရင် နားနှစ်ဖက်လုံးကို အပ်နဲ့ထိုးဖောက်ပြီး သွေးနှစ်စက်လောက် ထွက်လာတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်ပါ။ လူနာရဲ့ပါးစပ်က ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လူနာပုံမှန်ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေထိစောင့်ကြည့်ပြီး စိတ်ချရရင် ဆေးရုံပို့ဖို့ စီစဉ်ပါ။
ဤနည်းလမ်းသည် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချဖူးသူများကလည်း ၁၀၀% အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ထောက်ခံပေးထားပါတယ်။
ဆီးချိုသမားများတွက်​အသုံးဝင်​သည့်​ ​ကောက်​ရိုးနွယ်​ ပင်​
ကောက်ရိုး နွယ်ပင် ဆီးချိုစင် …………………………………. ကောက်ရိုးနွယ်ပင် ပဉ္စငါးပါးတစ်ဆယ်သားကို ရေသန့် ဘူး သုံးလီတာထည့်၍ တစ်လီတာကျန်အောင်ကျိုပြီးလျှင် တစ်နေ့ တစ်လီတာ သောက်သွားပါက ဆီချိုရောဂါ သက်သာသွားသည်ကို တွေရပါလိမ့်မယ်။ အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ ………………………………………. ဆီးချို သွေးချိုရောဂါ ကြောင်း …………………………………. ဆန့်နှင့်ထမင်း မျှစ်နှင့်ဝါး နှစ်မည်သာ ပြားပေမဲ့ တစ်ခုတည်းပါပဲ။ ထူးသာကတော့ အနုအရင့် ကွာသာပါပဲ သွေးချိုပြီးသော လူသာ ဆီးချိုမှာ သေချာပါတယ် ဆီးချို ပြီးသောလူဟာလည်း သွေးချိုမှာ အမှန်ပါပဲ မြန်မာတိုင်းရင်ဆေး အမြင်……..ဆီးချိုတော့မယ်ဆိုရင် ရောဂါ လက္ခာသုံးပါး ထင်ရှားဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။ ၁။ကိုယ်သားကိုယ်ရည် ယားယံ ခြင်း ၂။ အာခြောက်လာခြင်း ၃။လက်ထိပ် ခြေထိပ် များ ထုံကျင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရှိပြီးသားကိုယ်ခန္ခာတစ်တွဲထည်းမှာ […]
“ဆီးပေါက်ရာမှာ ဆီးတစ်စက်ထွက်ဖို့ သေမလောက်ခံစားနေရတဲ့ ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးနည်
“ဆီးပေါက်ရာမှာ ဆီးတစ်စက်ထွက်ဖို့ သေမလောက်ခံစားနေရတဲ့ ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးနည်း” ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် လုံးဝကျော်မသွားသင့်တဲ့ စာလေးပါ။ ဆီးပေါက်ရာမှာ ဆီးတစ်စက်ထွက်ဖို့သေမလောက်ခံစားနေရတဲ့ ဆီးရောဂါသည်တွေအတွက် ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆေး နည်း ======= အုန်း သီး အနုတစ်လုံးကိုထိပ်ကဖေါက်ပြီးရင် ကျောက်ချဉ် ကွမ်းသီး လုံးမျှ အုန်းရည် ထဲထည့်(မိနစ်၃၀)လောက်စိမ် ဒါပါပဲပြီးရင်အကုန်း သောက်လိုက်တာပါပဲဗျာ စမ်း ကြည့်ကြပါပျောက်ရင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ ဆီး ဝေဒနာရှင် တို့ များလှပါရဲ့#ဆီးပူဆီးအောင့်နဲ့ဆီးတစ်စက်စက်ကျသည့်ဆီးရောဂါခံစားရသူများ မိနစ် အနည်းငယ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းခြင်းကြုံရပါမည်။စာ ကိုးန က္ခ တ္တရောင်ခြည်အမှတ်၃၆၅ဇာ(တောင်ငူ)၏ ဆီးအောင့် ဆီးပူ နှင့်ဆီးတစ်စက်ပြီးတစ်စက်ကျနေတဲ့ ဆီးရောဂါ ခံစားနေရသူများအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးနည်းမှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ CRD—Original Owner
သေမိန့်စောင့်ရသူနှင့် လည်းတူလှသည့် ကင်ဆာသမားများ အတွက် ရဲယိုသီးအစွမ်း April 11, 2019 Latest Myanmar News ရဲယိုသီးစားကြဖို့လိုပြီကမ္ဘာကျော်တဲ့ရဲယို(သိအပ်ပါသည်) ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ အသည်းနှလုံးကို ကိုင်လှုပ်သည်က ရဲယိုဖြစ်သည်။ကင်ဆာဖြစ်သည်က သေမိန့်စောင်ရသူနှင့်လည်းတူလှသည်။ သို့သော် ရဲယိုအစွမ်းဖြင့်ကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းစေမည် လား၊ကာကွယ်နိုင်စေမည်လားစဉ်းစားဖွယ်ဖြစ် တော့၏။ ကင်ဆာရောဂါအတွက် အကောင်းဆုံး စမ်းသပ်မှုများကို တိရစ္ဆာန်များဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း ၊ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင် စမ်းသပ်ခြင်းစသည်ဖြင့် များစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကင်ဆာဆဲလ်များကို ရဲယို၏အာနိသင်ကတိုက်ဖျက်နိုင်သည်ဟု ဆေးသိပံ္ပပညာရှင်တို့၏ ကြေညာ ချက်သည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ ကင်ဆာရောဂါရှင်တို့ အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။် ရဲယိုသီးတွင်ပါဝင်သော (xeronine)သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူပြီး ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲက တစ်သျှူးတွေကို ကင်ဆာဆဲလ် အဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်အောင် ထိထိရောက် ရောက် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်ရဲယိုသီးမှန်မှန်စားသူတွေဟာ အရေပြား ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ အလားအလာနည်းလှပါသည်။ ရဲယိုတွင်ပါဝင်တဲ့ […]
နေ့လည်ခင်းကြီးတောင် သောင်းကျန်းနေကြတာ မိန်းကလေးတွေ သတိထားကြပါ